Izindiza ezilawulwa kude - iSearch
Qala Baby & Child amathoyizi Izindiza ezilawulwa kude
Izindiza ezilawulwa kude ukujabulela ukuthandwa kakhulu phakathi kwentsha nabantu abadala. Ngezinye izikhathi ziyinkimbinkimbi futhi zingaphezu nje kwetheyipi. Amamodeli amancane aklanyelwe ngqo indiza yasendlini, kanti iningi lendiza lenzelwe ukusetshenziselwa ngaphandle.
1 Iyini indiza elawulwa kude
2 Ukusebenza kwezindiza ezilawulwa kude
3 Izingxenye zomuntu ngamunye
3.1 Umsakazo wokulawula okude
3.2 Ama-Frequencies kanye namabanga wesikhathi
3.5 I-servomotors (servos)
3.6 Isilawuli sejubane noma isilawuli sejubane
3.7 Ubuchwepheshe bebhethri (accumulator)
5 Izinguqulo ezahlukene
5.1 imodeli izinhlobo
6 I-FPV ayidabuli futhi iyasebenza
7 Ilungiselela indiza yokuqala
8 Izinzuzo zezindiza ezilawulwa kude
10 Khetha indiza
12 Thenga ku-intanethi noma kumthengisi?
12.1 Ukuthenga ku-Intanethi
12.2 Ukuthengwa esitolo esikhethekile
Iyini indiza elawulwa kude
ngesikhathi izindiza ezilawulwa kude kuwukuthi Model ezindizeni, ezinemikhawulo yangempela yezindiza. Ngu zokulawula akude, isigwedlo imodeli kanye motors (ngaphandle glider) elawulwa zindiza, okuyinto ke off sigibele, ukuvula indiza, Uzalo kokwehla izoqaliswa. Kunempilo efana kakhulu Izimpendulo zemizekelo yangempelaokuyinto akuyona into nazo zonke izinhlobo. Uzothola nezindiza zezemidlalo ezilula, ezinezigaxa ezilodwa noma eziningi (ezihambisana nezinjini eziningi kangaka). Okuthandwa kakhulu yi-replicas of fighter Jets, lokhu I-propeller noma imbiza zihlomele. Abafakezi zimfucuza bahlanganiswa endaweni yokuhambisa izindlu, futhi kuvumela ukufakwa kwangaphakathi kumodeli ikakhulukazi jet onobuhle isetshenziswe. Izimpendulo zezindiza zempi nezombusazwe zitholakala kabanzi kubakhiqizi abaningi. Beka uhlobo olukhethekile izigliders ezilawulwa kude okungeziwe ngokungeziwe ngenjini eyisizayo (motor sailer, motor Glider).
Ukusebenza kwezindiza ezilawulwa kude
a izindiza ezilawulwa kude ingenye indiza yangempela, Ngokuvamile kudinga imoto ukufinyelela isivinini esidingekayo. Uma ukugeleza kokuhamba kwamaphiko kuphakeme ngokwanele, kuqala ukuhamba.
Njengendiza yangempela, idinga ukuqondisa ukulawula. Kuye ngesibonelo, kukhona ukuhamba okulawulayo, i-ailerons ne-elevator:
Ukungahambi kahle komgudla kubangela ukuphenduka ngakwesobunxele noma
Ukusebenza kwe-elevator kubangelwa ukuphakama noma ukuwa kwezindiza (umthamo noma ukunciphisa i-axis longitudinal).
I-ailerons ivumela ukujikeleza mayelana ne-axis longitudinal noma ukudubula.
Mayelana nokulawula okukude kungafaneleka Imiyalo ngomsakazo Yingakho bathunyelwa kumodeli RC ezindizeni ngokuthi. I-RC imele I-Radio Control futhi ubiza ukulawulwa noma ukulawula ngemilayezo yomsakazo. Umamukeli uthola izibonakaliso bese eqhuba ama-servomotors, awenza leyo miyalo ngokufanele futhi ahlele ama-rudders. ngesikhathi motor onobuhle ilawulwa yi-remote control kanye nesivinini se injini. Hamba njengezinjini Amagesi kagesi nokushisa iyatholakala. Ngenxa yentuthuko eqhubekayo emotshini kagesi kanye nobuchwepheshe bebhethri ehambisanayo, ama-motors kagesi asuse kakhulu ama-ignition engaphakathi kumdlalo wezemidlalo, lapho kudingeka khona ukusebenza okunamandla.
Izingxenye zomuntu ngamunye
Ngaphandle kwemodeli yendiza ngokwayo, ezinye izingxenye ziyingxenye yemodeli ephelele yokulungele ukuhamba.
Umsakazo wesilawuli kude uvumela umsebenzisi ukuba athumele "imiyalo" kumodeli. Kunezinjabulo ezimbili ezitholakalayo, okuyinto enezingqimba futhi eziqondile ingasuswa. Lokhu kuvumela imiyalo yokulawula ye-rudder kanye nokulawulwa kwezimoto okumele kwenziwe kahle. Kuye ngokuthi imodeli kanye nomsebenzi, ezinye izakhi zokulawula zingase zibe khona, isibonelo ishintshi yamagesi wokugibela okuphuthumayo. Ngomsebenzi ngamunye ngokuyisisekelo isiteshi esisodwa sidingeka. Ngakho-ke, ama-transmitter anamashaneli amaningi, okungenani ukulawulwa kwesiteshi se-3 esivele kunconywa ngamamodeli wemoto. Yiqiniso, ukulawula ngeziteshi eziningi kuvumela imisebenzi ehlukahlukene noma ukudonsa ukuze kulawulwe. Lokhu kuvumela umuntu izindiza ezilawulwa kude kuyoba nzima nakakhulu kubaqalayo ukuba baqonde indiza. Isitayela ngokuvamile sikhombisa ukuqhuma komfelandawonye, ​​njengokwendiza yangempela, ikakhulukazi uma lokhu kwenzeka endaweni ephansi.
Ama-Frequencies kanye namabanga wesikhathi
Ngokuba RC imodeli ezemidlalo Izinga lezimvamisa ezihlukene ziyatholakala. Isikhathi esithile, iziteshi ezithile ezigciniwe zamanethiwekhi we-27 MHz, i-35 MHz ne-40 MHz zivunyiwe eJalimane. Kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi ububanzi be-35 MHz buvunyelwe kuphela ezindizeni zezindiza. Lokhu kwandisa ukuphepha ngenxa yabasebenzisi bezinye RC onobuhle, isibonelo izimoto ezilawulwa kude noma imikhumbi, i-frequencies yendiza yezindiza ayikwazi ukuphazamisa. Akukade kudala ububanzi be-2,4 GHz RC onobuhle avunyelwe. Ngesikhathi esifanayo, ubuchwepheshe bokudlulisela nokwamukelwa buye kwathuthukiswa kule ndawo. Kuye esiteshini, isiteshi esingenasici esingaxhunyiwe manje sisesha ngokuzenzakalelayo. I-Transmitter ne-receiver nazo zihanjelana komunye nomunye ukuze esinye isilawuli esikude singasakwazi ukulawula imodeli.
Yiqiniso, umamukeli kumele afane nomthumeli osetshenziswe ngokwemibandela yevridi kanye nesiteshi sokudlulisela. Udinga ukunikezwa kwamandla, okuvame ukuhlinzekwa ibhetri ye model. It thola izimpawu kusuka umthumeli futhi ilawula servx axhunyiwe noma abalawuli for control motor ngokufanele. Ngesikhathi esifanayo, inikeza ama-servos noma abalawuli abaxhunyiwe ngamandla.
ngoba izindiza ezilawulwa kude Amagesi kagesi nokushisa atholakalayo. Kodwa-ke, iningi "abaqhubi be-amateur" bakhetha imoto kagesi. Kuzokwenza akukho inhlanganisela ye-petrooline okudingekayo, ukungcola komsindo kuphansi kakhulu futhi akukho mafutha wokukhipha. Izinjini zokuqothula cishe zisetshenziswa kuphela ochwepheshe, ezihlomisa, isibonelo, ezinamamodeli amakhulu nakakhulu kakhulu. Ukusebenza kwama-motors kagesi anamuhla (isibonelo ama-brushless motors) anele abasebenzisi abaningi. Izinjini zangaphakathi zomlilo nazo zinokukhubazeka ukuthi zidinga ukushisa futhi kufanele zixoshwe. Imoto kagesi isebenza ngokumelene nayo inkinobho njengoba nje okwamanje okudingekayo (ibhethri elibhekene necala) kuyatholakala.
Cishe konke RC onobuhle kumele kwenziwe ukunyakaza okwenziwe. Yiba ukulungisa ukuqondisa ku-a RC Car, ukulungisa i-rudder ku-a RC Isikebhe noma ukusebenza kwe-rudder ku-a izindiza ezilawulwa kude, Lo msebenzi wenziwa yi-servomotors encane kagesi, i-servos. Zitholakala ngobukhulu obuhlukahlukene futhi zinamandla okulungisa okuhlukile. Injini yomlilo yangaphakathi idinga futhi i-servo ukulawula amandla nge-throttle.
Isilawuli sejubane noma isilawuli sejubane
Amamori kagesi awalawulwa nge-servo njengezinjini ezivuthayo. Udinga umlawuli olawula i-voltage ye-motor kagesi. Lezi zilawuli, ezibizwa nangokuthi abalawuli bejubane, ziyatholakala ezinhlobonhlobo ezahlukene. ngesikhathi RC izimoto futhi abanye RC izikebhe Baphinde bavumele ukuguqula, yikuphi izindiza ezilawulwa kude Yiqiniso, ayinangqondo.
Ubuchwepheshe bebhethri (accumulator)
Amabhethri ali isitoreji amandla, Zivuselelwa ngokuphindaphindiwe futhi zinike amandla okudingekayo RC onobuhle iyatholakala. Ngokuvamile nazo zikhona Radio izilawuli kude, Ngu interconnecting amaseli amaningi, amaphaphu oyifunayo kufinyelelwa, isibonelo 6 Sinike x 1,2 volt amaseli, iphakethe webhethri 7,2 V. Le voltage inikezwa lapho ibattery volt, capacitance
ngo-A. ngoba RC onobuhle Isibonelo, amabhethridi e-nickel-metal hydride (NiMH) avame ukusetshenziswa asezingeni eliphansi lokuzikhishwa, isibonelo I-Kraftmax Racing Pack, Ngaphandle kwesixhumanisi esidingekayo kufanele izindiza ezilawulwa kude kufanele uqaphele isisindo futhi yiqiniso ngobukhulu bebhethri.
I-Kraftmax Battery racing Pack ene-Tamiya plug - 7,2V / 5000mAh / NiMH Battery / High Performance RC Battery Pack 5000 mahDisplay
Ububanzi bokunikezwa: Iphakethe le-1x Kraftmax elayishwa kabusha yebhethri ne-Tamiya ipulaki - 7,2V / 5000mAh
Amabhethri kumele avuselelwe ngemuva kokusetshenziswa. Lokhu kudinga ishaja. Ochwepheshe basebenzisa amashaja akhethekile, abuye avumele ukunakekelwa, ukulinganiswa komthamo futhi ngezinye izikhathi ngisho nokuvuselelwa kwamabhethri amadala.
Izindiza ezilawulwa kude zikhona noma zikhona lapho (kuye ngokuthi uhlobo lokuklama) eziningi noma zonke izingxenye ezidingekayo sezivele zifakiwe:
Amamodeli we-RTF zikulungele ukuqala. I-RTF isho ukuthi "ukulungele ukuhamba" ngakho-ke ukulawula okude, umamukeli nakho konke okunye sekufakiwe kule setha. Akukho okumele kuhlangane noma ukukhathazeka.
I-PNP imelela "ipulaki nokudlala". Lapha kusesandleni kumele sibekwe kwezinye izingxenye, ezingakafiki. Ngokuvamile, ukulawula okude, isamukeli noma amabhethri kufanele kusathengwa kule nguqulo.
ARF kusho "ukulungele ukuhamba". Sekuphelile, ngaphandle kokusebenza komhlangano wokukhanya noma ishaja yamabhethri.
BNF (ubophe futhi uhambe) kufanele ubophe ekulawuleni okukude ngaphambi kwezindiza.
RTB kusho "ukulungele ukubopha" futhi ubeka izindiza ezilawulwa kude, okwamanje idinga isamukeli nomsakazo.
Ngokuvamile, kunezinhlobo zezindiza njengemodeli, ekhona futhi yangempela. Ngaphezu kwalokho, kunamamodeli amaningi awasekelwe kunoma yiziphi izibonelo. Ngaphandle kwamamodeli amakhulu, awakhiwe futhi alawulwa ochwepheshe abanolwazi, amamodeli amancane athakazelisa abaqalayo. Nakhu double anesitezi, Motorplanes futhi Jets izintandokazi. Eziningi zazo izindiza ezilawulwa kude zenziwe nge-styrofoam (i-foam ebunjiwe), okuyinto enhle kakhulu izingane. Ziyanciphisa kakhulu ingozi yokulimala futhi futhi azenzele cishe ukulimala kokuphazamiseka:
Slowflyer kakade uhamba ngesivinini esisheshayo. Kulula ukuqonda futhi kufanelekile izingane ezingaphezu kwe-6 iminyaka. Okufanayo izindiza ezilawulwa kude ingahle idluliselwe emakamelweni amakhulu noma emahholo. Ukusetshenziswa ngaphandle kungenzeka, kodwa kufanele kube cishe kungenamandla.
izindiza zempi zithandwa kakhulu. Lapha, umphakathi womphakathi uhlanganyela ngokwamanje fighter Jets futhi Idelakufa noma izindiza ezindala ezivela ku-2. Impi Yezwe. Isibonelo, i-F-117 Nighthawk. Ngoba ama-jets alandela i-propeller, ekhona lapha, noma kunjalo, ngokuvamile iphakanyiswe ngemuva njenge-propeller yokucindezela, i-impeller iyatholakala. Lena ipelisi ye-jacket nge injini. Ngenxa yezindlu, kubonakala sengathi injini yejets of jets real. real jet izinjini empeleni zisetshenziswe yizinzuzo zamamodeli wazo. Nokho, ukusetshenziswa kwabo kungenzeka kuphela ngaphansi kwezimo eziningi.
Amamodeli wesilinganiso kukhona amakhophi anemininingwane yezibonelo zangempela. Lapha kwakungu ukwethembeka ekugxilweni. Lezi zindiza ezilawulwa kude zivame ukuba nezici zezindiza ezinhle kakhulu
Shock-Flyer zibonakala ngesisindo sabo esincane. Bafanelekile aerobatics (Imodeli yezindiza ye-3-D) futhi ingathathwa kahle esitokisini.
I-Lxhm Rc Izindiza i-F-117 Nightawk Stealth Cap Brushless 2,4 GHZ 100km / h Isibonisi se-Aviator RTFA
Zonke izingxenye zidwetshiwe ngokuningiliziwe futhi indiza ibheka ngempela imnandi
I-F-117 ingenza cishe nganoma yikuphi ukuhamba okune-acrobatic ongayicabangayo.
Ngenxa yokuzinza kwayo, kuyisinqumo esifanele kunoma ubani ofuna ukuzwa injabulo.
Indiza yenziwe nge-EPO ekhethekile epholile elula kakhulu kodwa futhi igxilile ....
I-FPV ayidabuli futhi iyasebenza
I-FPV imele "Umuntu wokuqala ubheke" futhi kuzosiza ngenye ikhamera kwenziwa. Ngesimiso esincane, ikhamera ifilimu indiza. Umthombo wevidiyo obangelwayo ungabonwa ngokuhamba kwesikhathi futhi ubonise indiza cishe evela kuyo "Ngibheka"njengokungathi umsebenzisi uqobo wayehlezi ohlelweni. Nge-FPV esebenzayo, i Izithombe zevidiyo ngesikhathi sangempela ithunyelwe kumamukeli. Lokhu kuvumela umsebenzisi ukulawula imodeli ngokusekelwe ezithombeni zevidiyo. Ukuhlaziywa kwesithombe kuzoba abaqaphi abancane noma Izibuko zevidiyo isetshenziswe. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ama-transmitters amabili asebenza ku-FPV esebenzayo, ukulawula okude okusakazwa umsakazo nokudluliswa kwesithombe sevidiyo. Ukugwema ukuphazamiseka okuhlanganyelana kwezingqimba zezimvamisa ezihlukahlukene kufanele kukhethwe, isibonelo i-2,4 ne-5,8 GHz.
Ilungiselela indiza yokuqala
a izindiza ezilawulwa kude kufanele ihlolwe kahle ngaphambi kokusebenzisa kwayo okokuqala. Ukwehluleka noma ukukhubazeka kungabangela ukuthi imodeli iqhume emoyeni. Indawo efanelekayo yendiza kumele ibe khona. Ezweni langaphandle kudinga imvume yemvume yomnikazi! Iziqondiso zezifunda eziphathelene RC ezindizeni kufanele kucatshangelwe. Kungenzeka kungabi khona izindawo ezihamba ngezinyawo eduze nezinyawo noma izindiza. Amabhethri ku-model, ukulawula okude futhi kungenzeka ukuthi umamukeli kufanele akhokhiswe ngokuphelele. I-propeller kufanele ihlolwe ukuze i-tightness. Imvamisa yomsakazo osetshenzisiwe kumele ingabi nenkinga. Ibhethri kufanele ifakwe ngokuqinile futhi ingabe isigxilile ekusebenzeni okungalawulwa. Abantu nezilwane kufanele zigcinwe kude nemodeli endizayo. Izinyoni ikakhulukazi zingawela i-trajectory ngendlela emangalisayo. Kodwa ngisho nezinja zingasusa noma zenze umhlaba Model izindiza beza ngokuyingozi. Izindiza eziphezulu zamanzi zikhulisa ingozi yokulahleka uma kwenzeka ukuphahlazeka. Imisebenzi yendiza (ukuguqulwa kwesisindo kanye nokulawula injini) kufanele ihlolwe kumodeli amanje.
Izinzuzo zezindiza ezilawulwa kude
Ukugxila kuzo zonke izinhlobo zokumnandi okukhulu. Kwenza obaba babe nenjabulo enkulu uma benesinye nezingane zabo iflaya qala, fly kanye nomhlaba. Ngakho, enye inguye izindiza ezilawulwa kude for abancane nabadala umdlalo ozithandayo kakhulu. Ngokwenza kanjalo, isizukulwane esincane sizokwazi ukuqonda ubuchwepheshe kusukela ebuntwaneni, okuhambisana nokufunda okukhulu. Ngokufanayo, kuyasiza ekuthuthukiseni amakhono emoto, a izindiza ezilawulwa kude ukufunda ukufunda. Kulo mdlalo wokuzilibazisa, kulula ukwenza abangane nabantu abanomqondo ofanayo, ngoba lolu daba lwama-aviator ahlukene luxhuma.
Ezinganeni ezincane, amamodeli amancane amakhompi afanelekile ngoba agcwele izilawuli ezinzima. Amamodeli anezinjini zangaphakathi zomlilo awafanelekile. Phatha ingane yakho ngesikhathi sokuzivocavoca okuhambayo!
Ukukhethwa kwamamodeli ahlukene kunkulu futhi kwenza ukukhetha kuvame ubuhlungu kumthengi. Ngakho-ke, kubalulekile ukucabangela izindlela ezithile ngaphambi kokuthenga:
Kuhlale kunconywa, uma unquma ikhwalithi enhle. Abakhiqizi abanjengeRobbe, i-LRP, i-Jamara ne-Graupner baye bathola igama elihle embonini ngenxa yezinga eliphezulu lazo eliphezulu.
Cabanga ngokuthi i-aircraft elawulwa kude ikude kangakanani. Qaphela amaphiko. Kufanele kube lula ukuthutha imoto yakho.
Ingabe kufanele iqhume ngaphakathi endlini, noma ufuna into enkulu ebhakabhakeni evulekile?
Chaza lapho ungavumela khona imodeli ekhethiwe ukuphakama nhlobo. Ngokwengxenye lokhu kudinga ubulungu embukisweni wendiza yendiza.
Hlola icala kanye nesikhathi sokushayela amabhethri. Hlela amabhethri okugcina ama-flight amade ahlala isikhathi eside alinganayo.
Njengomshayeli ongenalwazi kusuka ezindiza elawulwa kude, ungcono kakhulu kumodeli womqali. Lezi aziqhubeki ngokushesha futhi zincani ngobukhulu.
Thenga ku-intanethi noma kumthengisi?
Emva kwakho konke ukwaziswa, uqinisekile ukuthi uzibuze ukuthi ungubani izindiza ezilawulwa kude in izinga eliphezulu futhi kuya kwesinye intengo enhle angathenga. Sikunikeza amathuba amabili, zikhethele wena! Ukuhlukanisa phakathi kokuthenga ku-intanethi noma ezitolo zezimodeli.
Ngenxa yabathengisi abaningi be-intanethi, kukhona ukukhetha okukhulu okutholakala kwi-intanethi. I-assortment enkulu kwi-intanethi yenza ukuthenga imodeli oyifunayo kalula. Ungathenga ezitolo ekuqukethwe kwenhliziyo yakho azungeze iwashi Dlulisa amehlo kulokhu Izinsuku ze-7 ngesonto, Inzuzo futhi, izindleko zokuhamba kanye nezikhathi zokuhamba eziya kumthengisi. Bemi futhi izinethi ezithakazelisayo etholakalayo, okungaba yintengo ekhangayo kakhulu. Ngokuvamile, eyodwa noma enye eminye imikhakha ingatholakala kumthengisi we-intanethi. Lapha nakanjani uzothola okufunayo izindiza ezilawulwa kude ngaphambili. Akudingeki ukwenze ngaphandle kwezikhathi zokudiliva okusheshayo kanye nelungelo lokuhoxiswa. Ngeshwa, awukwazi ukuthatha imodeli oyifunayo ngokushesha nje nomthengisi wendawo.
Ukuthengwa esitolo esikhethekile
Sula inzuzo uma uthenga izindiza ezilawulwa kude Esikhathini esitolo se-model ungakwazi ngokushesha ukuthatha ikhaya le-model nawe. Okungcono, uzothola abasebenzi abanekhono lokubonisana nabo. Ngeshwa, lezi zitolo ziye zazingavamile, futhi ngokuvamile zishiya ukhetho olufunwa kakhulu. Ngokuvamile udinga inhlanhla, uma ufuna ukuthola imodeli oyifunayo ku-assortment. Ixhunywe ngokuthengwa esitolo ekuhambeni kancane. Ukulinda ukubonisana sekuye kwaphazamisa abanye abathengi. Ngokungafani nomthengisi we-intanethi, amanani okuthengisa okuyiqiniso angavamile. Ukubuyisa kungabangela izinkinga.
Isihloko esilandelayoIPhone X